> Resource > Samsung > $ 380 Million ama $ 52 Million? Imisa Samsung ku leedahay Apple
Sheekadu waxay u dhexeeya Samsung iyo Apple ayaa socday muddo sanado ah. November, waxay hadda ku dhex mareen ah ku doodi ka badan shatiyada ah u basaasayeen iyo inta Samsung Electronics leeyahay Apple u dayanayaan sifooyinka muhiimka ah ee iPhone iyo iPad. Apple ayaa dalbanaya $ 380 million, halka Samsung ayaa sheegay in kaliya lagu leeyahay $ 52 million. Ka dib markii maalin iyo bar doodayaan, ee xeerbeegtidu Silicon Valley dhamaaday fadhiga Wednesday ayaa go'aan aan.
Sida xaqiiqadu, Apple codsaday in ay iskaashi la sameeyaan Samsung oo awood shatiyada ay si Samsung codsan in qaadashada telefoonka, laakiin Samsung diiday. Markaas dagaalka ka bilowday, gaar ahaan marka Samsung koro. Labada shirkadood ayaa la xiraa in dagaal sharci oo dunida dacaladeeda ah ee awoodda in ka badan $ 300 bilyan oo suuqa smartphone.
Marka ay timaado in this, xaddiga lacagta in Samsung bixiso dayanayaan ka shatiyada muhiimka ah waa in Apple ma aha run ahaantii aad muhiim. Waxa kale oo laga yaabaa in hab fiican si aad isaga celiso qaar ka mid ah telefoonada iyo kiniiniyada Samsung ee suuqa. Si kastaba, waxay gaari doonaan go'aanka ugu soo dhaafay dib ugu soo laabtay maxkamadda, iyo natiijada ka bannayn.
Badan oo ku saabsan taariikhda maxkamad u dhexeeya Apple iyo Samsung
April 2011: Apple keenay dacwad ka dhan ah Samsung for "xadid" design ka mid ah iPad iyo iPad 2, dalbanayaan $ 2.5 billion. June 2011: Samsung keenay dacwad ka dhan ah Apple inay ITC. August 2011, maxkamadda degmada ee Dusseldorf soo saaray amar reebitaan ah hordhaca ah, mamnuucay daydo qaar ka mid ah Samsung ee Galaxy Tab kiniin. September 2011: Apple gudbiyey dacwada maxkamadda degmada ee Tokyo iyo Australia, ka dhanka ah Samsung voilating tiga ay ka iPhone iyo iPad. November 2011: Samsung ka codsaday in Australia iibiyeen Galaxy Tab iyo guulaystaan. March 2012: Samsung soo bandhigay maxkamada ee Seoul, South Korea, ku eedeeyay iPhone 4s iyo iPad 2 xadgudbay shatiyada ay. May 2012: Cook iyo Samsung ayaa kulmaan CEO ee San Francisco si uu u doondoono dib u heshiisiinta, balse ku guuldareystay. July 2012: maxkamadda ee California tegey inay Fidmo dacwada patent dhexeeya Apple iyo Samsung elektarooniga ah.
Talooyinka milkiilayaasha qalab Samsung
Wondershare Dr.Fone for Android (Android Data Recovery) , Android software kabashada xogta ugu horreeya adduunka ee, wuxuu kuu ogolaanayaa in aad ka bogsato xogta tirtiray ka badan qalabka Android, si gaar ah ee telefoonada Samsung iyo kiniiniyada. Waxaad isticmaali kartaa inuu ka soo kabsado lumay fariimaha, xiriirada, sawiro, video, audio iyo waraaqaha.
Waxaad kala soo bixi kartaa version maxkamadda hoose si aad u leeyihiin isku day ah, ama halkan tagaan oo ay u aragto liiska qalabka ay taageerayaan iyo Android .
Talooyinka milkiilayaasha qalab Apple
Wondershare Dr.Fone ee macruufka (iPhone Data Recovery) (Windows & Mac) waa macruufka software aduunka ee soo kabashada xogta ugu horeysay u isticmaala qof ahaaneed. Waxaad u isticmaali kartaa dib u soo ceshano xogta kala duwan sida xiriirada, fariimaha, qoraalo, wac log, camera oo duudduuban, il sawir, qoraal cod, iyo ka badan, ilaa iyo 15 nooc oo files. Waxaa ka shaqeeya weyn u iPhone iyo iPad ugu dambeeyay.